Alshabaab oo Weerar ku qaaday Ciidan fariisan kulahaa Duleedaka Balcad. – STAR FM SOMALIA
Alshabaab oo Weerar ku qaaday Ciidan fariisan kulahaa Duleedaka Balcad.
Wararka ka imanaya degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in iskahorimaad hubeysan oo ku dhex maray duleedka Waqoyi ee degmadaas ciidamada Milatariga dowlada Soomaaliya iyo dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Iskahorimaadkan ayaa bilowday kadib markii weerar lagu soo qaaday ciidamo fariisin ka dhigtey Haan Sheekh oo qiyaastii 7km ka xigta dhinaca Waqooyi degmada Balcad.
Dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase yeeshee sarkaal u hadlay ciidamada Milatariga ayaa sheegay in ay qasaare xoog leh gaarsiiyeen kooxdii soo weerartay ayna hayaan meydka mid ka mid ah kooxda weerarka soo qaaday.
Hase yeeshee majiro wax war ah oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo weerarkan soo qaaday,hase yeeshee halka weerarka uu ka dhacay ayaa ah meel ay bishii aynu ka soo gudubnay ay Al-Shabaab ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada Milatariga oo ku sii jeeday magaalada Jowhar xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.
Dad tahriibayaal Ah Ayaa ku geeriyooday Bada u dhaxeysa Liibiya iyo Talyaaniga
Al-shabaab Ayaa Rag Ku Toogtay Gobalka Shabeelada Hoose.